(L) ဘုရားသခင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။ dopamine neuron (၂၀၁၃) - သင်၏ Brain On Porn ဖြစ်သည်
(L ကို) သင်အဲဒီမှာဘုရားသခင့ရှိပါသလား ဒါဟာငါ့ကိုရဲ့ dopamine အာရုံခံဆဲလျ (2013)
သငျသညျရှိသညျဘုရားသခငျ၎င်း၏ငါ့ကို dopamine အာရုံခံဆဲလျ Are
စက်တင်ဘာလ 30, 2013 ·ခြင်းဖြင့် Talia Lerner
Dopamine အာရုံခံထွက်အဲဒီမှာအများဆုံးလေ့လာအများစု sensationalized အာရုံခံတချို့ရှိနေပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာသျော, သူတို့ကတစ်ဦးရဲ့အထောက်အထားအကျပ်အတည်း၏နည်းနည်းမှတဆင့်သွားခဲ့ကြရတယ်။ တစ်ဦး dopamine အာရုံခံဆဲလျကဘာလဲ? dopamine သုတေသနအတွက်တချို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့မကြာသေးမီပွေီးမှချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် dopamine အာရုံခံတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအပေါငျးတို့သသောဒဏ္ဍာရီ debunked ကြပါပြီ - နှငျ့သငျကဲ့သို့သောသူတို့ကိုဆကျဆံဆိုလေ့လာမှုမေးခွန်းထုတ်သင့်တယ်။
(ထို neurotransmitter dopamine ဖြန့်ချိမယ့်အာရုံခံဆဲလျအဖြစ်သတ်မှတ်) က dopamine အာရုံခံဆဲလျရုံ dopamine အာရုံခံဆဲလျမဟုတ်သောအရာအတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ငါကဒီမှာသုံးတကယ်ပဲအေးမြနည်းလမ်းတွေအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်:
dopamine လွှတ်ပေးရန်သောသူအပေါင်းတို့သည်အာရုံခံတစ်ချိန်တည်းမှာအတူတူပင်ရာဌာန၌ဖြန့်ချိမ။ Dopamine အာရုံခံသူတို့အာရုံကြောဆားကစ်သို့တက်နှင့်ချိတ်ဆက်နေဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ဦးနှောက် function ကိုနှင့်အပြုအမူများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်။
dopamine လွှတ်ပေးရန်သာ dopamine လွှတ်ပေးရန်ကြောင်းအားလုံးကတော့အာရုံခံ။ တချို့ကလည်းသူတို့အာရုံကြော circuit ကို function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လိုလေးနက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည့်အခြား neurotransmitters လွှတ်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်။
dopamine လွှတ်ပေးရန်သောသူအပေါင်းတို့သည်အာရုံခံအမြဲ dopamine မလွှတ်။ တချို့ကအာရုံခံသို့မဟုတ်ပိတ်သူတို့ရဲ့ dopamine ပေါင်းစပ်စက်ယန္တရားပြောင်းနိုင်သည်။ ထိုကြောင့်နိုင်စွမ်း၏, သူတို့ကပင် dopamine အာရုံခံအဖြစ်ယခင်သုတေသနအတွက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပါ။
ငါသည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုတွေ့ရှိချက်ကိုဖော်ပြရန်မီ, သော်လည်း, ငါ့ကိုသင် dopamine အာရုံခံမှစံအာရုံကြောသိပ္ပံ 101 မိတ်ဆက်ပေးကြကုန်အံ့။ dopamine အာရုံခံဆဲလျ function ကိုဒီသြဇာသီအိုရီ "Wolfram Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက '' 1997 သိပ္ပံစက္ကူကနေကျွန်တော်တို့ကိုလာဘီဘာအိုနှင့်ဆုကြေးတစ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာဟာ။ " ဒါဟာ dopamine အာရုံခံအချို့နောက်ခံနှုန်းဖြစ်သောမီး, မီးကိုပိုပြီးခန့်မှန်းရခက်တုံ့ပြန်အတွက်မဟုတ်, ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သငျသညျအကျိုးကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ကြောင့်မရကြပါလျှင်ထို့အပြင်သည်, dopamine အာရုံခံလျော့နည်းပစ်ခတ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် Schultz et al ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကြောင်း dopamine အာရုံခံ "ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား။ " ဝှက်သည်အဆိုတင်သွင်းဖို့, သူတို့ကသငျသညျမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုကောင်းသော, ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုး, အမှုအရာအဖြစ်ကောင်းပါတယ်ဖြစ်စေမငျသညျပြောပြပါ။ Schultz et al ။ ဤအအာရုံခံများ၏တုံ့ပြန်မှုအတော်လေးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း-ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံအတူတူထုံးစံ၌ကိုတုံ့ပြန်ကြသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုအလားတူအာရုံခံတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူ "ပြည်နယ်မှပေါ်သွားပါ။ အားလုံးတုံ့ပြန်မှု (55% 80 မှ) dopamine အာရုံခံ၏အများစုအတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ "
ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား၏ကွန်ပျူတာများအဖြစ် dopamine အာရုံခံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသုတေသနတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ထိုက်တန်လိုင်းဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအားလုံးကြောင်း dopamine အာရုံခံ, ထို့နောက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အဘို့ထိုသူတို့၏ 400,000-600,000 လိုကြဘူးလျှင်? * ဤတွင်ဘယ်မှာ၏မြေပုံင် ဦးနှောက်ရဲ့ dopamine အာရုံခံ (ကကြွက်ဦးနှောက်၏ cross-section မှာ) တည်ရှိသည်:
အရွယ်ရောက်သူကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine အာရုံခံဆဲလျဆဲလ်အုပ်စုများ A8-A16 ၏ဖြန့်ဝေ။ ဦး နှောက်ထဲရှိ SB Dopamine အာရုံခံစနစ်များBjörklund၊ A. & Dunnett မှလိုက်လျောညီထွေ - update လုပ်ခြင်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 30, 194-202 (2007) တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။
* လူသားမြားသညျ။ 160,000-320,000 မျောက်နှင့်ကြွက်များတွင်ရုံ 20,000-45,000 အတွက်ရှိပါသည်။
ဒီပုံကိုကြည့်, ပြီးသားသူတို့ A8-A16 တံဆိပ်တပ်ထားပါသည်ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, dopamine အာရုံခံအုပ်စုများအကြားအချို့စုစုပေါင်းခန္ဓာဗေဒဘာသာဂုဏ်ထူးဖြစ်ရှိပုံရသည်။ -ဒါ-သိမ်မွေ့မဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ထွက်လှည့်ပေးသောအသေးစိတ်ခန္ဓာဗေဒဘာသာဂုဏ်ထူးလည်းရှိပါတယ်။ လေ့လာမှုရဲ့ပထမဦးဆုံးလိုင်း၌ငါဒီမှာ Lammel et al အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများသို့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုအားဖြင့် (အထက်ပါပုံထဲက VTA, ဒါမှမဟုတ် A10) ကို ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံကွဲပြားခြားနားသွားအကြောင်းကိုထားကြ၏။ Lammel et al ။ အဆိုပါ VTA အတွင်း dopamine အာရုံခံအနည်းဆုံးနှစ်ခုသီးခြားစီလူဦးရေရှိတယ်လို့လေ့လာသည်။ တဦးတည်းသောလူဦးရေတစ်ဦးနှောက်ဧရိယာဆီက input အချက်ပြမှုများအဆိုပါ laterodorsal tegmentum ကိုခေါ်ရရှိသွားတဲ့နှင့်ဦးနှောက်ဧရိယာမှ output ကိုအချက်ပြပို့ပေး (ဤ LDT-dopamine-NAc အာရုံခံခေါ်ပါ) ကိုနျူကလိယ accumbens တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အခြားလူဦးရေနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula ကနေသွင်းအားစုရရှိသွားတဲ့နှင့် prefrontal cortex (ဤ LHb-dopamine-PFC အာရုံခံခေါ်ပါ) ကိုလက်ငင်းပေးပို့သည်။ ဘာဖြစ်သလဲ? ဤအ dopamine အာရုံခံအပြုအမူများအတွက်ကိစ္စမှာအားလုံးကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ကိုဆားကစ်သို့ကြိုးနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါသလား Lammel et al ။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုမပြသခဲ့သည်။ ဘယ်အချိန်မှာ (သုံးပြီး optogenetics!) သူတို့ကြွက်တွေမှာ LDT-dopamine-NAc အာရုံခံနိုင်ရန်သွင်းအားစု activated, သူတို့ကတိရစ္ဆာန်သူတို့နှိုးဆွပေးခဲ့ကြသည်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်နှင့်အတူအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွဆည်းပူးချင်ပါတယ်တဲ့ box ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဆနျ့ကငျြအခါ Lammel et al ။ LHb-dopamine-PFC အာရုံခံနိုင်ရန်သွင်းအားစု activated, အတိအကျကိုဆနျ့ကငျြဘလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များသူတို့ဆွဆည်းပူးချင်ပါတယ်တဲ့ box ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှောင်ကြဉ်။ အခြားလေ့လာမှုမှာ ကြွက်သဘာဝကျကျကောင်းသောအရာတစ်ခုခုသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြုံတွေ့လာသောအခါတူညီအုပ်စုတစ်စုအသုံးပြုပုံဤကွဲပြားဆားကစ်၏အားသာချက် differential modulated ခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ပေးထားကင်းသည့် LDT-dopamine-NAc လမ်းကြောင်းတစ်ခုတိုးချဲ့ခွန်အားပေမယ် LHb-dopamine-PFC လမ်းကြောင်းမပြောင်းလဲမှုကိုပြသသည်။ သူတို့ရဲ့ဖောတခုတခုအပေါ်မှာနာကျင်ကျိန်းပေးထားသောကြွက်ဟာ LDT-dopamine-NAc လမ်းကြောင်းမပြောင်းလဲမှုပေမယ် LHb-dopamine-PFC လမ်းကြောင်းတစ်ခုတိုးလာအစွမ်းသတ္တိကိုပြသသည်။
dopamine အာရုံခံတသားတည်းဖြစ်ကြောင်း Schultz et al ။ ၏ကနဦးပြောဆိုချက်, Lammel et al ထိခိုက်။ သူတို့မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်တည်းဖြတ်မူဖွယ်ရှိ 1990s ဖို့ 2010s ကနေအတော်လေးနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ပေးသောကြောင့်ရရှိနိုင်သည့် tool များ၏တိုးပွားလာ sensitivity ကို၏ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပိုသစ်သောနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကိရိယာများ, အနည်းငယ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက် Lammel et al ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ Schultz et al မှမရယူနိုင်ခဲ့ကြကြောင်းပရိယာယ်ခွဲခြားရန်။ ဤအပရိယာယ်ထုတ်ဖော်ခုနှစ်, Lammel et al ။ သင်စံနှုန်းများအကြောင်းကိုသင်လုံးဝသေချာမသိပါပဲ (သို့မဟုတ်မဖြစ်သင့်) အထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးလူဦးရေရဲ့ 55-80% အတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့မြင်သောကွောငျ့သငျသညျအာရုံခံ၏တစ်ဖွဲ့လုံးလူတန်းစားထွက်နေသေးတယ်င့်ယုံ၏ hubris ကိုသရုပ်ပြဖို့ကူညီပေးခဲ့သည် 'ကြောင်းလူဦးရေသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုပါ။ (ထဲမှာ Vivo အာရုံကြောအသံသွင်းစဉ်က dopamine အာရုံခံ defining ၏မေးခွန်းတစ်ခုလုံးသည်အခြားပြဿနာဖြစ်ပါတယ်) ။ Schultz et al မှကမ်ဘာပျေါတှငျအပေါငျးတို့သအကြွေး။ dopamine သုတေသန၏မီးမီးများအတွက်, ဒါပေမယ့်အဆုံးသတ်အမှတ်ထက်တစ်စမှတ်ပိုခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျဦးနှောက်ဆားကစ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုထုတ်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဦးနှောက်ဆားကစ်များကအာရုံခံအုပ်စုခွဲခြင်းသဘောအရတစ်တစ်တန်စေသည်။ သင်တို့မူကား, dopamine အာရုံခံ၏ dopamine တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုထုတ်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဘယျသို့လြှငျကော အများစုမှာ dopamine အာရုံခံဆဲလျသုတေသနတစ်ဦး dopamine အာရုံခံဆဲလျမီးလောင်မှုကြောင့် neurotransmitter dopamine, ဒီတူကြောင်းသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးဖြန့်ချိသည့်အခါယူဆထားပါတယ်:
တကယ်တော့ကျနော်တို့သတ်မှတ်ပုံကိုဖွင့် "dopamine အာရုံခံဆဲလျ။ " ကိုမကြာခဏသိပ္ပံမှာရှိတဲ့အမှုဖြစ်သကဲ့သို့မည်သို့ပင်ဆို, အခွအေနဒါရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့မထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ ငါကဒီမှာဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်မကြာသေးမီကသုတေသနပြု၏ဒုတိယလိုင်းမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်များ dopamine နှင့်အတူအချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သားကိုခေါ်သက်သေအထောက်အထား dopamine အာရုံခံနိုငျသောပူးတွဲဖြန့်ချိသည်အခြား neurotransmitter မော်လီကျူး, ပြသခဲ့သည်။
တကယ်တော့ dopamine အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းအစုအများဆုံးဖွယ်ရှိအများစု Co-လွှတ်ပေးရန်အချိုမှုသို့မဟုတ်ဂါဘမြို့သားဖြစ်စေ။ လေ့လာရေးများက Hnasko et al ။ နှင့် Stuber et al ။ အဆိုပါ VTA Co-လွှတ်ပေးရန်အချိုမှုအတွက် dopamine အာရုံခံသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးသူတို့အများအပြား VTA dopamine အာရုံခံ VGLUT2 ဟုခေါ်သောအချိုမှုပို့ဆောင်ရေး, အာရုံခံကနေဖြန့်ချိမှုအတွက်အချိုမှု packages တဲ့ပရိုတိန်းကိုဖော်ပြကြောင်းသတိပြုမိသည်။ VGLUT2 ၏ရှေ့မှောက်တွင် dopamine အာရုံခံ dopamine အပြင်အချိုမှုထုတ်ပိုးခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသလား? ဤမေးခွန်းကိုကိုကြည့်ဖို့, သိပ္ပံပညာရှင်များ dopamine အာရုံခံဆဲလျဆွဖို့နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံခံများ၏တုံ့ပြန်မှု (dopamine အာရုံခံ, Lammel et al ၏ဆွေးနွေးမှုကိုမြင်။ အထက်လက်ငင်းပေးပို့ကြောင်းတစ်နေရာတည်း) မှာကြည့်ရှုကြ၏။ အမှန်စင်စစ်သူတို့နျူကလိယ၏အစာရှောင်ခြင်း, excitatory တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု glutamatergic ထက်တစ် dopaminergic တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်တဲ့အမျိုးအစား VTA dopamine အာရုံခံ၏ဆွဖို့အာရုံခံ accumbens လေ့လာသည်။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုအချိုမှု receptors ၏ရန်အားဖြင့်သော်လည်းမ dopamine receptors ၏ရန်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် dopamine အာရုံခံအတွက် VGLUT2 ကင်းမဲ့ဖို့ဗီဇကိုင်တွယ်ကြွက်များတွင်မရှိထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။
အချိုမှု၏ Co-လွှတ်ပေးရန်သော်လည်းအားလုံး dopamine အာရုံခံအတွက်ပေါ်ပေါက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Lammel et al ၌ရှိသကဲ့သို့။ ရဲ့လေ့လာမှုများ, ဆက်သွယ်မှုကိစ္စရပ်များ။ Stuber et al ။ တစ်ဦးကိုအိမ်နီးချင်းဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံအဆိုပါ dorsal striatum မှရလဒျပို့ပေးရသော substantia nigra (A9), ခေါ်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်, အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်၏သက်သေအထောက်အထားမပြခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်နေဆဲအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အုပ်စုတစု, Tritsch et al ။, substantia nigra dopamine အာရုံခံအားဖြင့်အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်အချို့သက်သေအထောက်အထားများကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့တယျ။ ဂါဘမြို့သား: ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ထိုအ substantia nigra dopamine အာရုံခံကိုလည်းပူးတွဲဖြန့်ချိသေးသည်အခြား neurotransmitter ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါပမေဲ့အံ့သွသို့သော် substantia nigra dopamine အာရုံခံ VGAT, ပုံမှန်ဂါဘမြို့သား Transporter ဖော်ပြကြပါဘူး။ အဲဒီအစား, Tritsch et al ။ VMAT, အ dopamine ပို့ဆောင်ရေး, နိုင်လည်း Co-သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂါဘမြို့သား, dopamine နှင့်အတူ Synaptic လွှတ်ပေးရန်ကြောင့်ထုတ်ပိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Tritsch et al ။ ရဲ့တွေ့ရှိချက် substantia nigra dopamine အာရုံခံကျော်လွန်ယဘေုယပေလိမ့်မည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးန်းကျင်အချို့ဂါဘမြို့သားရှိပါတယ်အဖြစ်, VMAT ဖော်ပြဘာမှအလားအလာအဖြစ်ကောင်းစွာကြောင်းဂါဘမြို့သား package များနှင့်ဖြန့်ချိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အတိအကျဘယ်နေရာမှာနှင့်အခါ substantia nigra အတွက်ဂါဘမြို့သားဖန်တီးလျက်ရှိသည် Tritsch et al ။ ရဲ့လေ့လာမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းတစ်ခုမှာ key ကိုမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကရှိပါတယ်။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက် dopamine အာရုံခံကနေအချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သား Co-လွှတ်ရာသက်ရောက်မှုတွေထင်ရှားစေခြင်းငှါရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောအမူအကျင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု Hnasko et al မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စက္ကူ။ သူတို့က dopamine အာရုံခံအတွက် VGLUT2 ချို့တဲ့ကြွက်သာမန်ကြွက်ထက်ကင်းမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်န်းကျင်လျော့နည်း run ဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယခုထိုသို့ပါပဲ။ ဘာမှပါကကျွန်တော် transmitter ကို Co-လွှတ်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူဖို့ရှိသည်မည်မျှပိုပြီးပြသသည်။
ဒီတော့ဝေး, ငါတို့သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ကိုဆားကစ်သို့တက်နှင့်ချိတ်ဆက်, သူတို့ကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ dopamine ထက်အခြားဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြု. ဦးနှောက်ဆားကစ်မှာသူတို့ရဲ့တာဝန်ပေးအပ်အခန်းကဏ္ဍနိုငျသောအနေလျှင် dopamine အာရုံခံကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုအချက်ပြနိုင်သည်ကိုမြင်ကြပါတယ်။ ငါကဒီမှာဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်သုတေသန၏တတိယလိုင်းတှငျကြှနျုပျတို့ပုံမှတကယ်အေးမြရှုပ်ထွေးမှုမရှိသေးပါအခြား layer ကို add ပါလိမ့်မယ်: dopamine အာရုံခံသူတို့အောင်နှင့်နေဖြစ်စေမပြောင်းလဲနေတဲ့ကဦးနှောက်ကိုဆားကစ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောလမ်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် မှာအားလုံး dopamine လွှတ်။ ဒီကိစ္စမှာ, Dulcis et al ။ အဆိုပါ hypothalamus တည်ရှိသောငါယခုတိုင်အောင်အကြောင်းပြောနေတာခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေကိုထံမှ dopamine အာရုံခံတစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုတစုမှာကြည့်ရှုကြ၏။ သူတို့ကကြွက်များတွင် dopamine အာရုံခံများ၏အရေအတွက်ကြွက်များအားဖြင့်ကြုံတွေ့ "မိုဃ်းလင်း" ၏အရှည်နှင့်အတူအတက်အကျမှသလိုပဲကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်မိုဃ်းလင်းမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကိုးကားအတွက်မိုဃ်းလင်းထား - မီးတစ်ဦးအလွန်ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်ပေါ်များမှာပဲဖြစ်စေမ။ အများစုမှာဓါတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များတစ်နေ့လျှင်အလင်း၏ 12 နာရီ, ဒါပေမယ့် Dulcis et al ကြည့်ပါ။ ထို့အပြင်တစ်နေ့လျှင်သို့မဟုတ်5မှတက်မယ့် 19 နာရီကြိုးစားခဲ့သည်။ တိုတောင်းသောရက်ပတ်လုံးကြုံတွေ့ကြောင်းကြွက်များထက်ပိုခဲ့စဉ်ရှည်လျားသောရက်ပေါင်းကြုံတွေ့ကြောင်းကြွက်, သူတို့ရဲ့ hypothalamus အတွက်နည်းပါးလာ dopamine အာရုံခံရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်စာမေးပွဲအပေါ်သို့သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောအလင်းအခြေအနေများအတွက် dopamine အာရုံခံ၏နံပါတ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုသေဆုံးနေနှင့်မွေးဖွားခံအာရုံခံမှုကြောင့်မဟုတ်ကြကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။ အလားတူအာရုံခံအားလုံးအခြေအနေများအတွက်အဲဒီမှာအမှန်တကယ်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့သို့မဟုတ်ပိတ်သူတို့ရဲ့ dopamine-သမီး switching ခဲ့ကြသည်။ အလင်းထိတွေ့မှုကဤအပြောင်းအလဲများ, ဒါမှမဟုတ်အဘယ်အရာကိုအတိအကျအမူအကျင့်အကျိုးဆက်များဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘာဖြစ်လို့ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ ရလဒ်နေသမျှကာလပတ်လုံးရက်ပေါင်းခဲ့ကြွက်များနှင့်နည်းပါးလာ dopamine အာရုံခံ, (ကြွက် nocturnal ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုနှစ်သက်ဆိုတာကိုသတိရ) စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်အပြုအမူတွေပြသ။ ဒီတော့အဘယ်သူ၏ hypothalamic dopamine အာရုံခံတဲ့အဆိပ်အတောက်နှင့်အတူသေဆုံးခဲ့သည်ကြွက်များကိုပြု၏။ အဆိုပါကြွက်များတစ်နေ့လျှင်အလင်း၏ 12 နာရီတယ်ထို့နောက်ကြွက်တစ်နေ့လျှင်အလင်းကသာ5နာရီ, ယခင်က Non-dopaminergic အာရုံခံ dopamine နဲ့နည်းပါးလာစိတ်ကျရောဂါလွှတ်ပေးရန်စုဆောင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်ပေးခဲ့စဉ်သို့သော် dopamine အာရုံခံတဲ့အဆိပ်အတောက်နှင့်အတူသေဆုံးခဲ့သည်လျှင် အပြုအမူတွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တော်တော်လေးအေး! ထိုအအရေးကြီးတာက, ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ပင်ယခင်က dopamine အာရုံခံအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးအာရုံခံညာဘက်အခြေအနေများအောက်တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုပြသသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏အချို့ရှုထောင့်တည်ငြိမ်သောဖြစ် built နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကို Internalize အတွင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတှေ့အကွုံလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။
ဤအရာအလုံးစုံလေ့လာမှုများပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့သင်ယူကြသနည်း ငါ့ကိုရန်, ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာ takeaway ဦးနှောက်ကိုနားလည်တန်ဖိုးထားရှုပ်ထွေးဆိုလိုတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အနည်းငယ်ပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်စေရန်, ကလေ့လာမှုပုံစံများ span ကြောင်းဇီဝအဖွဲ့အစည်းများ၏အဓိပ္ပာယ်သည်ဆားကစ်နှင့်အပြုအမူနှင့်အတူမော်လီကျူးများနှင့်ဆဲလ်တွေချိတ်ဆက်ဆိုလိုသည်။ အဘယ်သူမျှမကပိုတစ်ခုတည်းကိုသာသူတို့ကိုလွှတ်နိုင်ပါတယ်တဦးတည်း neurotransmitter နေဖြင့်အာရုံခံအုပ်စုဖွဲ့။ မဟုတ်ကိုအမြဲ, ဒါကအာဆီယံတခါတရံနေဆဲသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအထက်လေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်င့်အဖြစ်။ တရားဝင် dopamine အာရုံခံအဖြစ်လူသိများအုပ်စုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစား, ငါတို့သည်လည်းအမှန်အတိုင်းလက်ခံထောက်ပံ့သောရှုထောင့်နှင့်အတူနောက်ကျောယခင်စာပေ၏ဆယ်စုနှစ်မှာကြည့်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဟောင်းတွေ dopamine အာရုံခံဆဲလျလေ့လာမှုများအတွက်ဒေတာမှားပေမယ့်ကောက်ချက်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ထင်အတော်လေးအဘယ်အရာကိုမကျမည်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဟာကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ dopamine အာရုံခံဝှက်အတိအကျအဘယ်သို့သောအကြောင်းအတော်များများက arcane အငြင်းပွားမှုများအမှန်တကယ်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းများတွင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကျင့်သောနားလည်ခြင်းအားဖြင့်အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးပုံရပေမည်, သို့သော်ဤဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသိပ္ပံပညာ၏အလွန်ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်: အုတ်အုတ်သဲသဲမပြုကြနှင့်။ မသာဖြစ်စဉ်ကလုံးဝအရေးပါသည်ပုံမှန်ပါပဲ။ သိပ္ပံပညာရှင်များအဆက်မပြတ်သိသာထင်ရှားသောအယူအဆရေးရာတိုးတက်မှုများကိုထင်ဟပ်ကြှနျတျောတို့၏အဓိပ္ပာယ်မေးခွန်းထုတ်နှင့်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဓိပ္ပာယ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစအစားပျင်းစရာကောင်းရှိနိုင်ပါသည်, ငါသူတို့လည်းမကြာခဏပျောက်သိပ္ပံမှလူမောင်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်မစတင်ဇီဝဗေဒကျောင်းသားတစ်ယောက်ခဲ့တဲ့အခါ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အဆုံးမဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူသလိုပဲအဘယ်အရာကိုအလွတ်ကျက်ကူညီရန်စာလုံးကတ်အောင်နာရီပေါင်းအပေါ်သို့နာရီပေါင်း။ ငါဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေ '' ကလပ်တစ်ခုငွီးငှေ့ဖှယျပေမယ်လိုအပ်သောစတင်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ဒါကြောင့်မျိုး stunk ပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်, ငါအလုပ်လုပ်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အမိန့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးရန်နိုင်တော့မည်ဖို့ဝေါဟာရသင်ယူဖို့ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုပြောသည်။ အဘယ်အရာကိုငါသညျငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ထပ်မံတိုးတက်င့်အဖြစ်သဘောပေါက်နားလည်လာပါတယ်တစ်ချိန်ကထင်ရသောအဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်-and သူတွေကိုဘယ်လိုမသိမသာကွဲပြားဖြစ်ပါသည်, မှားယွင်းတဲ့ Right-or-အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် - သူတို့အထဲသို့ထုပ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပရိယာယ်နှင့်သမိုင်း။ သိပ္ပံနည်းကျအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု dopamine အာရုံခံဆဲလျမြား၏အဓိပ်ပါယျကဲ့သို့ရုံဘုံဘာသာစကားမပေးပါဘူး, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ၏အလွန်သဘာဝတညျဆောကျပုံ။ ကျနော်တို့အဲဒီလိုအဖြစ်, ငါတို့သည်လည်းထိုအအဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကန့်သတ်နိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ၌ဤဖွဲ့စည်းပုံလိုအပ်ပေမယ့်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှပုံစံလုပ်ရန်အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်။ ကျနော်တို့အုပ်စုသည်ပျမ်းမျှအကြောင်းပြောဆို။ ဒါကြောင့်အတိအကျအမှုအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများတွင်ထည့်သွင်းထားတဲ့သိသိသာသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုအုပ်စုခွဲအတွက်မွေးရာပါဟာဘက်လိုက်မှုသတိပြုမိဖြစ်ရမည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဓိပ္ပာယ်အားလုံးအပြီးဒါငြီးငွေ့စရာမဟုတျပါ! ဘယ်လိုအစစ်အမှန်သိပ္ပံပညာရှင်များနဲ့တူထင်မှကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်, ဤအသိပေးချက်၏ဆွေးနွေးချက်များမိတ်ဆက်ခြင်းသင်တန်းပစ္စည်းအတော်လေးနည်းနည်းတက်မြိန်နိုင်ဘူး။
အာရုံခံဆဲလ်အမျိုးအစားများကို defining ၏အထူးမေးခွန်းတစ်ခုကိုတကယ်မျှမျှတတအချိန်မီဖြစ်ထွက်လှည့်။ ကိုယ့်စုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်အကြာ, ပထမဦးဆုံး ကြားဖြတ်အစိုးရအစီရင်ခံစာ ဦးနှောက်ကိုပဏာမခြေလှမ်းအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်အုပ်စုသည် (လည်း Astra Bryant ရဲ့ကြည့်ရှုထွက်လာသ တိုင် ) ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာ။ အထဲတွင်, ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 2014 အဘို့အကိုးအမြင့်ဆုံးဦးစားပေးသုတေသနလုပ်ငန်းဒေသများ, ခံရခြင်း, ဤ၏ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထားပါသည်အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ငါကဒီမှာဆွေးနွေးခြင်းခဲ့တာကိစ္စရပ်များအသိအမှတ်ပြု "ဆဲလ်အမျိုးအစားတစ်ခုသန်းခေါင်စာရင်း generate ။ ":
အတွေ့အကြုံ, ဆက်သွယ်မှုနဲ့ neuromodulators အပါအဝင်အချက်များစွာအမျိုးမျိုးပိုင်းတွင်အလားတူအာရုံခံ၏, မော်လီကျူးလျှပ်စစ်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမျိုးစုံနိုင်ပါတယ်ကတည်းကအာရုံခံအမျိုးအစားသည်အဘယ်အရာပေါ်တွင်သဘောတူညီမှု, သေးမရှိပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ပင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ Subtype ခွဲထုတ်ချွန်ထက်နယ်နိမိတ်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အဲဒီမှာအမျိုးအစားများကိုလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အခ်ါဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်ပြုရန်ယာယီသဘောတူညီချက်ရရှိထားပြီးသတ်မှတ်နိုင်ယေဘုယျသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်, ဤခွဲခြားသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူဘို့အကောင်းတစ် Starting Point သို့ပေးနိုငျသညျ။ ထို့ကြောင့်သန်းခေါင်စာရင်းတွင် neuron ကောင်းစွာ-ဖော်ပြထားကြီးမားသောအတန်း (ထို cortex ၏ဥပမာ excitatory ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ) နဲ့စတင်ပြီးတော့သည်ဤခွဲခြားမှုအတွင်းအသေးစိတ်အမျိုးအစားမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဤသည်မှာသန်းခေါင်စာရင်းကကနဦးမပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုသိသောဥာဏ်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကြားမှာကျော်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
မေးခွန်း "ဘာတစ်ဦး dopamine အာရုံခံဆဲလျဖြစ်ပါတယ်?" အတော်လေးလာမည့်သည်မဟုတ်, High-profile ကိုမေးခွန်း၏အသိအမှတ်ပြုမှု, ထိုသို့အတိုင်းလိုက်နာသင့်ကြောင်းအဆိုပါရန်ပုံငွေမှအဖြေတစ်ခုအရေးကြီးသောပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းမှရွှင်လန်း။